imisebenzi LoMhlangano musa njalo ukuhlinzekela ukuzibandakanya imishini ekhethekile futhi umshini amathuluzi, kanye iziqobosho ezivamile. Indlela ehlukile ukuze lelisu izinkinga ezifana ukusetshenziswa isibhamu okuyisisekelo. Abazi nje esikhundleni imishini enamandla angaphezulu izipikili ezivamile, kodwa futhi uvumele ukuxhumeka ngokucophelela, ngokunembile futhi ngaphandle ukungcola ngokweqile. Ethandwa kakhulu stapler ungenantambo, angasetshenziswa ngaphandle kokubheka izinto zikagesi.
Izici Main ithuluzi
Ukusebenza stapler kunqunywa voltage lapho ibhethri iyasebenza ke. Ngokwesilinganiso, ke zokhahlamba kusuka 3.6 kuya 14 V. Ekusebenteni, umehluko phakathi kwamanani amabili okwedlulele voltage okungase kuthintwe e ikhono umshini ukushayela izipikili ezinobukhulu ezithile kanye nesikhathi operation ngaphandle ukushaja. Ngokwesibonelo, ibhethri stapler 3.6V umberego okuyisisekelo ubude-15 mm, kanti isikhathi umsebenzi walo kuyoba amahora 1.5-2. Amamodeli nge voltage 14 V sizonikeza kalula yokusingatha hardware eside ukudlula u 20 mm, ekuqedeni kudingeka ubuyise ukukhokhiswa 3-4 amahora.
Kubalulekile ukuba acabangele ezinye izici ergonomic. Ngakho, uma umthamo webhethri ivumela ukusebenza okuqhubekayo, le evulekile ikhasethi iyunithi futhi ivumela ukuba afeze ukusebenza serial obandayo ngaphandle umthamo wemvula njalo ukudla. Isilinganiso esitolo umthamo 150-200 hardware. Ngaphezu kwalokho, enamandla ungenantambo stapler nakanjani kuhluke mass esikhulu. Akukhona njalo elula, njengoba opharetha at inqwaba ngamunye kuyodingeka nisebenze kanzima ithuluzi ukuqondanisa. onobuhle Esilula ngokuvamile nesisindo esingaphansi kuka-1 kg, kanye namadivayisi ephezulu ukusebenza - 3-4 kg.
Abakhi bemishini othomathikhi enophephela ukunikela ezimbili izinguqulo staplers. Le nguqulo eliyisisekelo iyithuluzi esebenza ukudla nezinzipho yobukhulu amancane naphakathi. onobuhle ezinjalo ingasetshenziswa nokubopha Upholstery, ifilimu, mncane panel ngokhuni nokunye. D. Ukusebenzisa izinto mkhulu futhi baqinisa Kunconywa ukubethelwa umnyuziki stapler ibhethri, okuyinto amandla ngokwanele enkonzweni abanye bendabuko phansi futhi udonga izibhinco. Ingasetshenziselwa ukulungisa linoleum, laminate mncane, carpeting futhi ezahlukene odongeni ukwemboza.
Uphenyo Bosch PTK 3.6 imodeli
Uma udinga idivaysi encane obujwayelekile, engasindi futhi ergonomic ukusetshenziswa endaweni yasekhaya, ukhetho best lokhu model kunzima ukuthola. Njengoba abasebenzisi ukubika, ukuguqulwa idivayisi enchanted le esontweni, kodwa imodeli ukuba babhekane ngokufanele ngokuya izinga ukusebenza imisebenzi yayo. Enye into ukuthi akubona bonke abantu abajabule ngayo ukusebenza insimbi. Kubalulekile ukuqonda ukuthi ibhethri Stapler Bosch PTK 3.6 kuyinto omele ephansi amandla nobuchwepheshe, has a esitolo nesizotha ngaso ukudla 100 nokushayela imvamisa ongaphakeme. Ngakolunye uhlangothi, kuya pluses onobuhle zihlanganisa abanikazi ukwakhiwa benethuba ukubeka eqondile, ukushaja ukubonisa uhlelo futhi ikhono ibhethri njengoba enjalo. Lokhu kunjalo uma ithuluzi entry level ihlinzeka sasivumela nehlala njalo - I-5 amahora. Nokho, inqubo ukusebenza kungenziwa kuphazamisekile futhi ngenxa yokucekelwa: Umagazini ezincane-umthamo, ingasaphathwa nokufaneleka ezingabazekayo sedivayisi ezifana ukwakhiwa kanye ukukhanda emikhulu imisebenzi.
Uphenyo imodeli Makita DPT351Z
Ngezindlela ezithile lokhu okuphambene okuyisisekelo langaphambilini, okuyinto wagxila master professional. Amalungu amathuluzi ukugcizelela yokusebenza kwalo ngezindlela eziningi, yizinhlobonhlobo, Ergonomics kanye ukuthembeka design. Empeleni, izinga izindlu kanye nokusetshenziswa jikelele Sakhiwo sangekhatsi - ukuthi Japanese lwendabuko nge stapler apharathasi German. Kodwa stapler ibhethri Makita e DPT351Z ukuguqulwa usebenza ngaphansi kwamandla 18 V, okuyinto kwelulwe kakhulu ukusebenza kwayo. Abanikazi idivayisi kubonisa ukuthi ubhekana ukushayela pin izinzipho mayelana 35 mm ubude. Ngakho, kungenzeka ukuba ngokuqiniseka ukwenza flooring stapler kokungathembeki nezinye izinto yokuqedela ukuthi ukujabulela abasebenzisi sigubha ukubuyekeza yabo. Ezibani yesimanje indlela ukudla efakwe esitolo kuzosiza umzimba ukuze ngidambise ngenkathi kwenziwa imisebenzi umsebenzi.
Izibuyekezo imifanekiso Ryobi ONE +
uhlelo I Ryobi kwabakhiqizi futhi isici ephezulu staplers, okuyinto zingafani umsebenzi izinga kanye lula umsebenzisi. Ngokusho abanikazi abaningi, amalungu + umndeni ONE is ngokufanele ukuhanjwa indima insimbi jikelele yalolu hlobo. Letindlela futhi sinikeze okusezingeni eliphezulu imvamisa ukushayela, ukusekela ukusetshenziswa izinzipho ubude 65 mm futhi libhekene i design ergonomic. Kanye kwalezi zimo ezinhle eyayikuzo Ryobi ungenantambo stapler ushibhile kuno esincintisana esiseduze Makita. Uma imodeli Japanese 18 iyatholakala emakethe ngoba izinkulungwane 18-19. Hlikihla., Imodeli elinezimfanelo ezifana kusukela Ryobi angathengwa ayizinkulungwane 15-16. Kulokhu akusiyo kusobala ukuthi ukhetho lwesibili sasiyolahlekelwa njengoba izimbangi abadumile xaxa.
Ngaphambi kokuthi uqale kokuhlaziya staplers ezihlongozwayo emakethe, ngeke kube engadingekile, isimiso, ukuthola indlela efanelekayo okufushane elishajekayo endabeni ethile. Yiqiniso, ukuhlela kabusha enjalo kukhona ngconywana uma kuqhathaniswa nenethiwekhi analogs ngoba ukuphila kwebhetri kungenzeka. Kodwa ngakolunye uhlangothi, ngisho ibhethri engasindi futhi icwecwe Stapler Bosch uchungechunge PTK singaba ngaphansi elula kuka inethiwekhi version compact izimfanelo zokusebenza ezifanayo. Lokhu Umehluko ngqo kuthinta khona umklamo ibattery, okuyinto evame ukusho phakathi izibuyekezo, umshini esinzima ngokwengeziwe. Futhi, ukukhetha ongema ku umbuzo uhlobo ibhethri. Njengoba kuphawuliwe ngochwepheshe eziningi nabanikazi, kangcono makudle a kunokwethenjelwa futhi imvelo lithium-ion izakhi, nakuba zinezikhwepha eqolo ngaphezu kwanoma nickel-cadmium amabhethri noma silicon.
Shredders - ukubuyekezwa. Ogelezayo engadini kagesi - ukubuyekezwa. zasengadini
Ukufulela lukathayela - okokusebenza eshibhe
'Ketorol' e ampoules
Ama-lenses ama-wide angle angaphezulu kakhulu we-Nikon